Accueil > Gazetin'ny nosy > Fandrobana fitaovam-panjakana: Tompon-daka ireo Minisitra Hvm
Fandrobana fitaovam-panjakana: Tompon-daka ireo Minisitra Hvm
Araka ilay fanapahana navokan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny zoma teo dia nomeny herinandro ny filohampirenena hanendrena izay ho Praiminisitry ny marimaritra iraisana. Miankina amin’ny fahitana an’io « marimaritra iraisana » io izany ny fanendrena. Etsy ankilany anefa, mety ho ady saritaka indray ny famaritana ny voalazan’ny andininy faha-54 ao amin’ny Lalàmpanorenana satria isan’ny navoitran’ny Fanapahan’ny Hcc ny fanajana an’io andininy faha-54 io amin’ny fanendrena an’ilay ho Praiminisitra.
Misy fifanoherana ihany izany, rehefa halalinina, satria ny fampiharana ny andininy faha-54 ao amin’ny Lalàmpanorenana dia hentitra fa « izay antoko na vondron’antoko pôlitika manana solombavambahoaka maro an’isa indrindra ao anatin’ny Antenimierampirenena no manolotra ny anaran’izay hotendren’ny filohampirenena ho Praiminisitra ».
Momba an’io manokana ange izany dia tsy mipetraka ny hoe “marimaritra iraisana” satria na iza na iza vondrona na antoko pôlitika manana ny maro an’isa dia izay hatolony ho tsy maintsy tendren’ny filohampirenena ho praiminisitra e! Etsy ankilany, miteraka ady hevitra koa ny hoe « iza àry no antoko na vondron’antoko manana ny maro an’isa io » ? Ny fanapahana navoakan’ny Hcc tamin’ny zoma ihany koa dia efa mahavaly azy io hoe « mifototra amin’ny didim-pitsarana navoakan’ny FItsarana manokana nisahana ny fifidianana (Ces) tamin’ny fanambarana ny voka-pifidianana ofisiany momba ny solombavambahoaka ».
Fa ny ady hevitra iray dia hoe « raha toa moa izany ka tsy hajain’ny filohampirenena indray izay fepetra izay, toy ny tsy nanajany an’izy io tamin’ny nanendrena an’i Kolo Roger na i Jean Ravelonarivo na i Mahafaly Olivier Solonandrasana dia ahoana ? ». Enga anie mba ho ahiahy fotsiny io fanontaniana io.
Fa ny lafin-javatra iray tsikaritra koa dia ny akon’io fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana tamin’ny sabotsy io ihany. Aorian’ny fahavitan’ny filohampirenena manendry an’izay ho Praiminisitra (izany hoe manomboka ny zoma izao satria rahampitso zoma no tokony ho fetra farany tsy maintsy mahavoatendry izay ho Praiminisitra), dia manana herinandro koa ny Filohampirenena hanendrena izay minisitra handrafitra ny governemanta, ka miainga avy amin’ny tolo-kevitry ny praiminisitra ny fanendrena an’izay ho minisitra.
Ny akon’izany dia manana fotoana hikarakarana ny tontolo ao anatin’ny ministera notantaniny ireo minisitra Hvm. Ao anatin’izany ny fanamboaramboarana ny antontan-taratasy isan-tokony. Ny fanafenana ireo antontan-taratasy mety hirakitra tsiambaratelo. Ny sora-bola isan-tsokajiny mety hampisaringotra raha misy ny fanadihadiana. Fa mitranga koa ny fandrobana fitaovam-panjakana mialohan’ny handaozan’ireny minisitra Hvm ireny ny toerany. Ny kojakojan’ny fiara, ohatra, dia tratran’izany (kodiarana, bateria, kojakoja maro). Soloin-dry zalahy kojakoja efa niasa ny kojakoja mbola vaovao. Mitohy amin’ny fangalarana ny milina solosaina, ka ao ny mandroba izany mivantana fa ao ny manolo milina solosaina efa tsy mandeha intsony fa lasany entiny mody toy ny fananany manokana ireo tao ampiasana.
Sanatriavin’ny vava, toa fanomezan’ny Hcc vahana ny fandrobana ny fitaovam-panjakana ilay fanapahana noraisiny satria nahazo fotoana nanodinkodinan’ireo minisitra zavatra maro ny raharaha.